रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग सातौ दिन : रुपन्देही ११, मिड वेस्टर्न र डिसिए सेमिफाइनल प्रबेश ! | Cricket Himalaya |
रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग सातौ दिन : रुपन्देही ११, मिड वेस्टर्न र डिसिए सेमिफाइनल प्रबेश !
By Bhanu Sigdel Last updated Jun 20, 2018 267 0
सुर्खेतमा जारि रुस्लान कर्णाली प्रिमियर लिग अन्तर्गत सातौँ दिनको खेलहरुमा एबिसी क्रिकेट क्लब, रुपन्देही ११ र धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले जित हात पारेका छन् । आज सम्पन्न खेलहरु पछि समुह ‘बि’ बाट ४ खेलमा ४ वटै जितको साथ धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले तथा ४ खेलमा ३ जित र १ हार पछि मध्य-पश्चिम क्रिकेट क्लबले सेमीफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ । समुह ‘ए’ बाट रुपन्देही ११ ले ४ खेलमा ४ वटै जितको साथ सेमीफाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ भने बिहिबार हुने खेलपछि दोश्रो टिमको टुंगो लाग्नेछ ।
दिनको पहिलो खेलमा एबिसी स्पोर्ट्स क्लबले रोयल राइजिंग क्लबलाई ६ रनले पराजित गर्यो । टस जितेर ब्याटिंग गरेको एबिसी स्पोर्ट्स क्लबले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १३९ रन बनाएको थियो । उसको आगि दिनेश पुनले ३३ तथा मिलन क्षेत्रीले ३१ रन बनाए । रोयल राइजिंगका बलर सन्दिप शाहीले ३ विकेट लिए । १४० रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा रोयल राइजिंग क्लबले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १३३ रन मात्रै बनाउन सक्यो । रोयलको लागि सुमन गुरुङ्गले ३८ रन तथा आशिष सिंहले २२ रन बनाए । एबिसीका बलर दिनेश अधिकारीले सर्वाधिक ४ विकेट तथा अनिल खरेलले २ विकेट लिए ।
आज सम्पन्न दोश्रो खेलमा रुपन्देहि ११ ले प्रतियोगितामा चौथो लगातार जित हात पार्ने क्रममा महाकाली क्रिकेट क्लबलाई १०४ रनको बिशाल अन्तरले पराजित गर्यो । टस जितेर ब्याटिंग गरेको रुपन्देही ११ले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २०९ रनको बिशाल योगफल तयार गरेको थियो । उसको लागि निश्चल चौधरीले सर्वाधिक ८५ रन बनाउने क्रममा ५१ बलमा ६ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । यस्तै शक्ति गौचनले अविजित ४२ रन बनाउन २४ बलमा ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । बलिङ्गतर्फ महाकालीका हेमन्त धामी र आकाश चन्दले समान २/२ विकेट हात पारे । २१० रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा महाकालीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १०५ रन मात्रै बनाउन सक्यो । उसको लागि कप्तान रोबिन क्षेत्रीले २८ तथा पारस केसीले २६ रन बनाए । रुपन्देहीका बलर कृष्ण कार्कीले ३ विकेट तथा शक्ति गौचन, सन्दिप सुनार र बिक्रम भुसालले समान १/१ विकेट लिए ।
तेश्रो खेलमा धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिंग सेन्टरलाई ४ विकेटले पराजित गर्यो । टस जितेर ब्याटिंग रोजेको काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिंग सेन्टरले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १४१ रनको योगफल तयार गरेको थियो । उसको लागि बिरात भण्डारीले सर्वाधिक २४ रन, दुर्गेश थापाले २० रन, सचिन लेखकले १६ रन, प्रितम थापाले अविजित १५ रन तथा भोज राज भट्टले अविजित ११ रनको योगदान दिए । धनगढीका बलर पवन कार्कीले सर्वाधिक २ विकेट लिए । धनगढी क्रिकेट एकेडेमीले १७.५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १४२ रनको लक्ष्य पछ्यायो । ७० रनमा ५ विकेट गुमाएको अवस्थामा एकेडेमीका कप्तान भुवन कार्कीले किशन बिस्टसंग छैठौं विकेटको लागि ५८ रनको साझेदारी गर्दै जितको आधार तयार गरेका थिए । टिमलाई जिताउन बिजयी चौका प्रहार गरेका भुवनले अविजित ७४ रनको इनिंग खेल्ने क्रममा मात्र ३६ बलमा ६ चौका र ६ छक्का प्रहार गरे । किशनले ९ रन बनाए भने त्यसअघि बिपिन रावलले ३० तथा सुबोध ऐरले १९ रन योगदान दिए । काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिंग सेन्टरको लागि भोज राज भट्टले ३ तथा बिपिन आचार्यले २ विकेट हात पारे ।
खेलको प्लेयर अफ द म्याच भुवन कार्की घोषित भए ।
Dhanagadi Cricket AcademyKarnali Premier Leaguemid western cricket academyrupandehi 11
नेक्सस क्रिकेट एकेडेमीकाे यु-१९ र यु-१६ टिमले श्रीलन्कामा सिरिज खेल्ने !!
नेपालले एकदिवसिय खेल नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्दै